Wararkii Ugu Dambeeyay Doorashada Galmudug - Awdinle Online
Wararkii Ugu Dambeeyay Doorashada Galmudug
January 16, 2020 (Awdinle Online) –Waxaa beri oo jimco ah lagu wadaa in magaalada Dhuusomareeb ee caasimada maamulka Galmudug ka dhacdo Doorashada Gudoonka Baarlamaanka Galmudug, waxaana doorashada ku tartamaya musharaxiin dhoor ah.
Waxaa caawa magaalada Dhuusomareeb ka socda olole xoogan ay wadaan Mushaaxiinta u taagan xilka Gudoomiyaha Baarlamaanka iyo labadiisa kuxigeen , waxaana caawa xarumaha musharaxiinta ka jira mashquul aad u badan.
Ololaha ugu xoogan waxaa caawa wada Musharaxiinta u taagan xilka Gudoomiyaha Baarlamaanka Galmudug kuwaa oo wada dadaalo mid kastaahi ku doonayo in uu kasbado kalsoonida Xildhibaanada codkooda lagu kala baxayo.
Magaalada Dhuusomareeb ayaa caawa ka duwan habeenadii lasoo dhaafay, waxaana caawa ka jira guryaha ay degan yihiin Musharaxiinta mashquul badan, waxaana tagaya oo la qaabilayaa xildhibaanada Galmdug.
Mashquulka ugu badan ayaa ka jira guriga Gudoomiyaha Baarlamaanka Galmudug , waxaana halkaasi ku sugan inta badan Xildhibaanada Galmudug kuwaa taageero balaaran u muujinaya musharaxa.
Previous articleMarwada Madaxweynaha Soomaaliya door intee la eg ayay ku leedahay Doorashada Galmudug
Next articlePuntland iyo Jubaland oo sheegay inay ka wada hadlayaan danaha gaarka ah iyo xaalka Dalka